'सरकारले लगानीकर्ता र कर्मचारीबीच झगडा पार्ने काम नगरोस्'
पर्यटन अर्थ नीति समाचार
सम्झना घिमिरे काठमाडाैं, १९ वैशाख
विश्वव्यापी माहामारीको रूपमा फैलिँदै गएको कोभिड –१९ ले देशका सबै क्षेत्र चरम संकटतिर धकेलिइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा मारमा पर्यटन व्यवसाय परेको भन्दै सरकारले कर्मचारी र लगानीकर्ताबीच झगडा पार्ने किसिमका काम नगर्न होटल एसाेसिएन नेपाल (हान) की अध्यक्ष सृजना राणाले आग्रह गरेकी छिन् ।
मासिक रूपमा होटल क्षेत्रमा मात्र १ अर्ब ८० करोड रकमबराबरको क्षति होटल व्यवसायीहरूले झेलिरहेको अवस्थामा सरकारले सक्रियता नदेखाउँदा कर्मचारी र लगानीकर्ताबीच मनमुटावको स्थिति सिर्जना भएको अध्यक्ष राणा बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘सरकारले होटल क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म पर्यटन क्षेत्रमा कति पीडित छन्, कति क्षति भयो भन्ने यकिन तथ्यांक निकाल्न सरकारले ढिला गर्‍याे । यो सरासर सरकारी निकायको हेलचेक्र्याइँ हो । हाम्रो दु:खमा तत्परता देखाएन सरकारी निकायले । यसले गर्दा हामी थप आर्थिक संकटतर्फ धकेलिइरहेका छौँ ।’
उनले भनिन्, ‘उचित तथ्यांक नआउँदा आवश्यक राहत पाउन सकेका छैन । जसले अहिले लगानीकर्ता र कर्मचारीबीच झगडा पार्ने स्थिति निम्तिँदै छ । सरकारले यसरी दुई पक्षलाई झगडा पार्ने काम कदापि गर्नु भएन ।’
राष्ट्र बैंकले राहतस्वरूप पुनर्कर्जा तथा सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरे पनि त्यो अपुग भएको अध्यक्ष राणाको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, सरकारको आदेशअनुसार चैत महिनामा पूरा तलब दियौँ । अहिलेको अवस्थामा ६ महिनाको सर्भिस चार्ज वितरण गरिसकेको छैन । त्यो पैसा हामीसँग सञ्चित छ, जसमा श्रमिकहरूले मासिक ८ हजारदेखि १२ हजारसम्म पाउनेछन् र योबाहेक तलबबराबरको १२.५० प्रतिशत रकम दिँदा ५० प्रतिशत पुग्छ ।
तर, श्रमिकहरूले भने पूरै तलब पाउनुपर्ने माग गरिरहेकाे उनकाे भनाइ छ । अध्यक्ष राणा भन्छिन्, सरकारले राहत पनि पुग्ने ल्याएको छैन । अब कसरी दिने कर्मचारीलाई पूरा तलब ? त्यसैले अहिले कर्मचारी र लगानीकर्ताबीचको समन्वय खट्केकाे छ । यो समस्यालाई हल गर्न सरकारले पनि सक्रियता देखाउनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले वैशाख महिनाको तलब ५० प्रतिशत दिनू भन्ने निर्देशन मानिरहेको अवस्थामा केही होटल व्यवसायीहरू भने ५० प्रतिशत तलबसमेत दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । नेपालमा त्यस्ता होटल व्यवसायीहरू पनि छन्, जसले कुल आम्दानीको ४५ प्रतिशतसम्म रकम कर्मचारीको तलबमा मात्रै खर्चन्छन् ।
राणा भन्छिन्, ‘अब १ महिनादेखि बन्द अवस्थामा रहेका होटल व्यवसायीले कसरी दिने कर्मचारीलाई तलब ? त्यस्ता व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकको राहतले पुग्दैन । पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउने हो भने थप राहत ल्याउन जरुरी छ ।’
सरकारले अबको दिनमा साना तथा ठूला होटल व्यवसायीहरूलाई ब्याज मिनाहा, बिजुली, करलगायतका विभिन्न क्षेत्रलाई समेटर राहत प्याकेज ल्याउन राणाले आग्रह गरिन् ।
अहिले पर्यटन क्षेत्रमा कोरोनाले गर्दा १५ खर्बको क्षति भइसकेको पर्यटन बोर्डको तथ्यांक छ भने होटल क्षेत्रमा मात्रै मासिक १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भइसकेको अवस्था छ ।
कोरानाको कहर अहिल्यै सकिने छाँटकाँट छैन । कहिले सकिन्छ र व्यवसाय सुचारु हुन्छ भन्ने अवस्था नरहेको समयमा होटल क्षेत्रलाई विशेष राहतको प्याकेज नल्याए समग्र मुलुकको होटल व्यवसाय नै चाैपट हुने अवस्था छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १९, २०७७, १३:५०:००